Sidee ku darto Final Cut Pro kala guurka ee Mac
Qaybta 1aad: Sida loo dar kala guurka ee Pro Goo Final on Mac?
Qeybta 2: Sidee ku darto kala guurka on Windows?
Si loo hubiyo in pro la jarjaray final helo ugu wanaagsan ee user tayada marka filimka waxaa loo wareejiyey goobta ayaa midba midka kale waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in uu hab ee kala guurka waxaa loo isticmaalaa. Waxay kuu ogolaaneysaa in user si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee tayada tahay waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira iyo guud ahaan aragtida wanaagsan ee waxa kale oo ay shardi tahay in uu yahay fiicnayn. Guur aan ka dhigi kaliya tayada filimka fiican laakiin sidoo kale in la hubiyo in nooca muqato ee suuqa kala iibsiga goobta ayaa waxaa sidoo kale si buuxda u hartay si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada barnaamijyada farshaxanka arrintan la xiriira.
Intaa waxaa dheer guur ku Mac
Guurka waa wax la xiriira mid Final oo sidaas daraaddeed user waxaa ku dari kartaa guud ahaan dhufto ee kala duwan si fudud oo ku qanacsan tahay sida ay u hubiso in ka dhigi doonaa in ugu fiican iyo gobolka processing farshaxanka waxaa lagu sameeyaa oo wax soo saarka ugu danbeeya waa kan ugu khayr oo dhan jeer. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale qabaa in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka waa wax fiican oo sidaas daraaddeed waa wax lagu dhaqmo karaa iyadoo aysan arrinta iyo dhib. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijyada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa in aan lahaa oo kaliya la kordhiyo geynta ee barnaamijyada ee kala guurka laakiin sidoo kale hubin doona in dadka isticmaala ee this xiriira heli natiijada fiicnayn iyo arrinta guud ee processing heerka sub sidoo kale loo xalin lahaa sida ugu dhakhsaha badan kala guurka ah lagu daray. Qaybta dambe ee maqaalka la xaqiiqda ah in sida user a ku dari kartaa guurka isticmaalaya pro cut dambeeya ee Mac macaamiloon doonnaa. Sidaas darteed waa in dhalashada Mac Final Cut Pro waa barnaamijka ugu wanaagsan ee lagu kala guurka daro in.
Sidee ku darto kala guurka ee Pro Goo Final on Mac?
Waxaa jira geedi socodka dhawr ah oo la soo korsaday ayaa laga yaabaa in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka processing tahay in arrintan la xiriira iyo nidaamka guud ee intaa dheer kala guurka waa u fududahay in ay raacaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in mar kala guurka ah lagu daray waxa loo xisaabinayaa laga yaabaa in la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka processing farshaxanka waxaa lagu sameeyaa oo xuduudaheedu ayaa waxaa sidoo kale lagu qeexay in loo isticmaali karo si loo hubiyo in kala guurka la beddelo sida per baahida loo qabo iyo baahida user. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in sida ugu wanaagsan ee ay la socdaan tallaabooyinka lagu xusay in qayb ka mid ah tutorial ayaa waxaa sidoo kale raacay si user ah ma aha oo kaliya helo natiijada ugu wanaagsan balse ay ka ayaa sidoo kale intaa ku daray in sifooyinka wanaagsan. Geedi socodka waxaa kale oo ku xusan ee URL https://support.apple.com/kb/PH12592?locale=en_US oo sidaas daraaddeed user sidoo kale waa in la hubiyo in ugu wanaagsan waxaa laga codsadaa ka dib markii habka la akhriyo si buuxda. Ka dib waa tallaabooyinka ku lug leh arrintan la xiriira:
Marka barnaamijka la bilaabay qalabka menu waa in laga heli gudaha baarka weyn ee qalab. Marka samaysay cidhifka clip waa in la qabto si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican iyo habka ay hore u socto,
Marka la sameeyo laayeen clip la iftiimiyay lahaa sida jaalaha ah sida waxa loo arki karaa in sawirka hoos ku qoran:
Si aad ku dari ay ka user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in badhamada Command + T waxaa lagu weeraray on keyboard ah:
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in button-guurka waxaa riixi ka bar-guurka ee qalabka, loo baahan yahay la doorto iyo tan soo gabagabeyn doonto geeddi-socodka ee buuxa:
Intaa waxaa dheer guurka on Windows
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka in la qaban karo si loo hubiyo in user helo aragtida wanaagsan ee iyo guud ahaan fiicnayn in aan soo bandhigo meel kale. Intaa waxaa dheer kala guurka waa arrin horay loo arkaa in ay tahay sida ugu fiican oo sidaas daraaddeed pro la jarjaray final daaqado waa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka tafatirka tahay video in la hubiyo in ugu fiican iyo natiijada guud cajiib ah ahbaa ee la xiriirta ka dhigi kara video-guurka. User ayaa isticmaali kartaa barnaamijka si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijyada farshaxanka waxaa lagu riyaaqay oo intaa dheer kala guurka maaha wax dhibaato ah oo dhan. Waxa kale oo ay ka dhigi lahaa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira iyo habka la sameeyo si sahlan sidii hore. Qaybta dambe ee tutorial inay hubiyaan in ku daray kala guurka la isticmaalayo OS daaqadaha iyo pro cut final ma aha arin oo dhan iyo user natiijada ugu wanaagsan oo aan wax arrin oo dib u dhac arrintan la xiriira ka heli kartaa ka dhigi doonaa.
Sidee ku darto kala guurka on Windows?
Waxaa jira tobanaan kun oo qalab ayaa la heli karaa online si loo hubiyo in ay ka waxaa lagu daray isticmaalaya barnaamijka. Sidaas darteed waxaa fiican iyo waxa ugu muhiimsan in la ogaado in qalab lacag la'aan ah oo loo isticmaalo. Wax waa barnaamij lacag la'aan ah iyo talaabooyinka soo socda ay muujiyaan sida loo isticmaali karaa hab ugu fiican:
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in ka URL http://www.debugmode.com/wax/download.php barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay:
User ayaa haatan u baahan yahay inuu soo dhoofsadaan video iyada oo loo marayo haamaha warbaahinta, kaliya sagxad ah ee icon card waa in la sii adkeeyey in la furo suuqa kala cusub ka halkaas oo warbaahinta la keeno karo:
User ayaa ku dari kartaa ay ka adigoo gujinaya kaliya u dhexeeya labada clips si fursadaha muuqan. Marka ay ka waxaa lagu daray dhammayn doonaa geeddi-socodka ee buuxa:
User ayaa markaas dhoofin karto mashruuca ka dib markii goobaha ku habboon waxaa lagu sameeyey arrintan la xiriira. Geedi socodka ah ee ku daray kala guurka la isticmaalayo wax la soo dhameeyay in buuxa.
Sida loo soo dejinta DVD in iMovie
10 Final Cut Pro daadkii si uu si bilaash ah
> Resource > FCP > Sidee ku darto Final Cut Pro kala guurka ee Mac